Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahrain Breaking » Umboniso waseBahrain kunye neZiko leNgqungquthela line-GM entsha
Iindaba zeBahrain Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Umboniso omkhulu weZiko laseMbindi Mpuma kunye neZiko leNgqungquthela lichaza iGM entsha
UGqr. Debbie Kristiansen uqeshe uMphathi Jikelele we-Bahrain International Exhibition & Convention Centre, ngenxa yokuvula ngo-2022.
Umboniso waseBahrain wamanye amazwe kunye neZiko leNgqungquthela liza kuvulwa ngo-2022.
Iziko liya kuba yeyona ndawo inkulu yohlobo lwayo eMbindi Mpuma.
Ugqirha Kristiansen uhleli kwaye usebenza kuMbindi Mpuma kangangeminyaka eli-16.
I-ASM Global ichonge indawo enamava yolawulo lwendawo yoMbindi Mpuma kunye noochwephesha kwezolonwabo uGqirha Debbie Kristiansen njengoMphathi Jikelele we-Bahrain International Exhibition & Convention Centre, ngenxa yokuvulwa ngo-2022.
entsha I-Bahrain International iMiboniso kunye neZiko leNgqungquthela isethwe ukukhulisa ubukumkani baseBahrain njengendawo ekhokelayo yeentlanganiso kunye nemisitho eya kuyo, etsala utyalo-mali lokhenketho lwexesha elizayo kunye neminyhadala kwingingqi. Nge-95,000 sqm yendawo yomboniso kwiiHolo ezili-10, iholo enezitulo ezingama-4,000, amagumbi okuhlangana angama-95, iRoyal & VIP Majlis kunye nendawo yokutyela ehlala abantu abangama-250, eli Ziko liza kuba yeyona ndawo inkulu yohlobo lwayo kuMbindi Mpuma.
Ukuqeshwa kukaGqr Kristiansen, oye waphila kwaye wasebenza kuMbindi Mpuma kangangeminyaka eli-16, kuye kwaqhwatyelwa izandla kulo lonke eli shishini. Kubekwa kwi-30 ephezulu yabafazi abakhuthazayo kwi-Arab World 2019 nakwi-Middle East i-CEO yabasetyhini yoNyaka we-2018, ngomsebenzi omde owaziwayo kwezokhenketho, kwimiboniso, kwiminyhadala nakwimizi-mveliso yolonwabo, ulwazi lukaGqr Kristiansen kunye nokuqonda kwenkcubeko kunye Uhlobo lommandla luya kuba yinto exabisekileyo kwindima yakhe entsha.
Usihlalo we-ASM Global APAC kunye noMongameli weSithili seGulf, uHarvey Lister AM uthe uGqirha Kristiansen ngoyena mntu ulilungelo lokuthatha inxaxheba yoMphathi Jikelele wolu phuhliso lubalulekileyo.
“UDebbie unamava angaphaya kweminyaka engama-30 kolu shishino kwaye izakhono zakhe zobunkokeli ziya kuzisa iimpawu ezininzi ezizodwa kwindima.
"Ukuchongwa kwakhe kuzakunceda ukudibanisa igama le-ASM ye-Global kule ngingqi njengoyena mvelisi ophambili kwihlabathi lamava kunye nokuphucula imeko ye-Bahrain njengendawo yeentlanganiso zamanye amazwe."
Ethetha ngokuqeshwa kwakhe, uGqr. Kristiansen uthe 'unemincili' ukujoyina usapho lwe-ASM lweHlabathi kunye nodumo olungenakuthelekiswa nanto lokuhambisa ezona ndawo zibalaseleyo kwindawo yolawulo kunye nemisitho kunye nokwenza amava angalibalekiyo.
“Ukuba nethuba lokusebenza kokubini kwi-ASM Global, kunye nokubuyela kwindawo entle yaseBahrain, liphupha elizalisekayo. Oku kuyakundivumela inyhweba yokunceda ekucebiseni nasekwakheni italente kunye neseti yezakhono zamaBahrainis amancinci kwizizukulwana ezizayo.
“Ndikulangazelele ukusebenza ngokusondeleyo kunye Bhareyini Ezokhenketho noMboniso weGunya lokuphuhlisa nokukhulisa ishishini le-MICE lehlabathi, kunye nokudala ilifa lexesha elide le-Bahrain, utshilo.
U-Iain Campbell, uSekela Mongameli oLawulayo, i-ASM kwiHlabathi liphela-kwiGulf, ukwamkele ukuqeshwa kukaGqr.
“Kuluvuyo ukuba noDebbie kwiqela elinolwazi oluninzi kunye namava kushishino olubanzi, kwingingqi nakwamanye amazwe.”
U-Iain Campbell uthe ujonge phambili ekwamkeleni abanye abaqeqeshi beshishini kwiqela njengoko iprojekthi iqhubeka, enika ithuba elikhethekileyo kwabo bafuna ukuba yinxalenye yomboniso omkhulu kunye neyona ndawo iphambili yomboniso kunye nendawo yeengqungquthela.
UFilipu Quaico Quaicoe uthi:
NgoSeptemba 14, 2021 kwi-10: 33
Ndinomdla kwiqabane layo nayiphi na iarhente yokuhamba efuna ithuba lokusebenza ngokubambisana nearhente yokuHamba eGhana
Nayiphi na inkampani enomdla okanye iArhente kufuneka inxibelelane nam kwinombolo yam ye-whatsapp + 233 542 927 021
Iseli + 233 502 444 228
Imeyile i; [imeyile ikhuselwe]